Portfolio-karazana sy Unbalancing - Blockchain News
Raha misy mpampiasa vola dia nanapa-kevitra mafy ny faniriany amin'ny vola amin'ny cryptocurrencies ary nianatra ny karazany rehetra ny mahaliana vola madinika, tonga ny fotoana ny mieritreritra momba ny firafitry ny fampiasam-bola ny portfolio ho avy.
Ny fampiasam-bola portfolio-dia fitambaran'ireo crypto fananana nangonina mba hanatratrarana tanjona iray eo amin'ny endriky ny tombom-barotra. Ny zavatra, tsena ny fitondran-tena toy izany indraindray tononiny fepetra, izay efa ananana ny fiarovana ny fananana dia efa fandresena lehibe. Ary noho izany, rehefa mamorona ny portfolio-, dia ilaina ny mitandrina tsy ny mety vola madinika iray manokana, fa ny fihevitry ny fitadiavam-bola fa ny crypto tsena tolotra. ary, mazava ho azy, ny farany dia ny manao zavatra dia mametraka ny vola rehetra tamin'ny vola madinika iray monja ao amin'ny fanantenana fa hahatonga anao ho crypto mpanapitrisa.
Fast sy mampatahotra vs. Long sy Easy
Conventionally, paikady fampiasam-bola dia azo zaraina ho roa. Maharitra fampiasam-bola no nifidy ny mpandala ny mahazatra mpampiasa vola, izay vonona hanao sorona haingana tombom-barotra (Raha tsorina, isika tia ny crypto tsenan'ny ho amin'izany). More filokana tsena mpandray anjara miantehitra amin'ny fohy ezaka tia ady varotra, mampanantena tselatra-haingana ny vola miditra miaraka amin'ny avo mety ho very ny zava-drehetra indray mandeha.
Ny fampiasam-bola ny portfolio azo namorona miorina amin'ny paik'ady roa ireo, mizara ny rehetra nahay ny cryptocurrencies ho maharitra sy ao anatin'ny fotoana fohy ireo. Tsara hotadidina, na izany aza, fa raha maharitra, vola madinika azo antoka fotsiny dia afaka ho vidiana, ary niandry avy ny vidiny handrava rakitsoratra, dia ho ao anatin'ny fotoana fohy ny fampiasam-bola, na izany na tsy izany, dia ho ilaina ny mitsoraka any an-fototra ny varotra, mianatra ny fitsipika sy ny fomba amam-panao ny tsena, ny fototra ara-teknika fanadihadiana, ary sasatry ny vaovao hanara-maso ny mombamomba ny crypto tsena.
Aza koa ny hanadino ny zava-misy fa na dia toa azo antoka vola madinika afaka hitondra tena amin'ny fomba tsy manara-penitra, ary mitsoraka tampoka ho eo an-lalina ny vidin-javatra. Ny olona izay nividy Bitcoin for $19,000 izao zara raha mihevitra azy io ho azo antoka ny fampiasam-bola. Ny tsena dia ny tsena, ary ny lavitra ezaka mila fampiasam-bola sy ny faharetana Spartan nanamafy mivaingana rafi-pitatitra. Tsy ho very adala sy tsy misy fananan'ny amidio ny fanananao rehetra amin'ny vidiny ambany indrindra no tena asa ny mpampiasa vola izay niditra ny tsena ho ela ny ela.
Teo anelanelan'ny Bears sy ny ran'ombilahy
Ny iray amin'ireo fomba mazava indrindra ny diversifying loza dia ny haka toerana eo amin'ny omby sy ny orsa, nampisaraka ny fananan'ny amin'ny fomba fa misy zavatra atao miaraka na ny bullish sy ny bearish fironana. Misy atahorana ny jerking azy roa tonta ary ny iray, satria tsy maintsy manapa-kevitra na te-hanatevin-daharana ny manan-tsaina, na ny tsara tarehy. Ankoatry ny, vitsy ny olona mitantana ny mifamadika ny atidoha eo amin'ny zavatra andrasana avy ny fiakarana sy ny fahalavoana ny crypto-pananana. Amin'ny maha-fitsipika, dia lavo amin'ny fitiavana miaraka amin'ny pananana, Te-hino fa ny olana dia tsy maharitra, ny kisary ireo zavatra miafina, ary ny vola madinika no efa akaiky triatra labozia miakatra.
Zavatra tsy fitoviana dia ho mety ho an'ny mpampiasa vola ankitsirano izay ela very finoana fahagagana, mazava tsara ny famantarana ny tsena, ary afaka mialoha ny fitondran-tena ny na ny omby sy ny bera fandraisana.
Tsy misy henatra in fisandohana
Ho afaka tsy fahadisoana maro, raha mampiasa vola alohan'ny nianaranao ny traikefa izay efa ela no tao an-tsena. Soa ihany, misy be dia be ny misokatra loharanon-karena, mpampiasa vola izay mamoaka vaovao mikasika ny crypto Portfolios isan'andro. Tadiavo ny bilaogy na telegrama fantsona, izay hitanao kokoa mahaliana. Tandremo tsara ny fahamarinan-toerana ny portfolio-, ny mason-tsivana izay vola madinika no nanampy azy, sy ny fitondran-tena ny mpampiasa vola raha ny stagnation ny tsena. Mamorona ny portfolio-amin'ny alalan'ny fampitahana amin'ny portfolio-ny sy ny, raha ilaina, manaraka ny torohevitra ny mpampiasa vola momba ny fividianana ny fananana vaovao.
Ny safidy faharoa tsy mahakasika fandefasana ny atidoha dia manaraka an-jambany ny fanolorana ny mpanakalo. Hatramin'izao, misy am-polony maro crypto bots, amin'ny fomba izay manome famantarana isan'andro mba hividy na hivarotra crypto-pananana manokana, manondro ny ohatry ny portfolio-ny tanteraka, manaraka izay mampihena risika. Fanontaniana iray hafa dia tsy fantatra fa tahaka ny inona no fepetra takina ny mpivarotra raha ny marina ao ambadiky ny fampiharana efa, tsy hisy hiaro anao tsy ho tafiditra amin'ny tambabe paompy sy ny dumps, sy ny hetsika ny tsy fahombiazana, afaka ihany no manome tsiny ny fampiharana amin'ny finday.
Niverina tany amin'ny fahafahana vola, izay manome ny crypto tsena, iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny unbalancing ny portfolio-dia ny fizarana toe-bola amin'ny alalan'ny fampiasam-bola fitaovana. Izany no fomba fampiasam-bola vola matihanina ny asa.
Io karazana portfolio-mety mitady zavatra toy izao:
25% mitondra vola madinika ho an'ny fampiasam-bola maharitra (BTC, Ita, XRP);
25% antonony-teny fivarotana in ambony altcoins;
10% robotized fanelanelanana;
10% milina varotra sy ny varotra algorithmic;
10% raharaham-barotra tamin'ny vaovao (Tracking Gainers sy resy);
10% ny fampiasam-bola amin'ny fanantenana ICOs;
10% avo-doza crypto fananan'ny.
Ny isan-jaton'ny mizara ao amin'ny portfolio-toy izany dia miankina amin'ny fomba tsara mahay ianao amin'ny fampiasam-bola iray paik'ady sy ny fomba mety Raha ny amin'izao fotoana izao ny toe-draharaha eo amin'ny tsena crypto.
Ny portfolio-crypto azo namorona sy mifototra amin'ny fampiasam-bola amin'ny tany ho toy ny fandaharan'asa miovaova isan'andro eo amin'ny lafiny ara-dalàna fitsipi-pandaminana ny cryptocurrency eo amin'izao tontolo izao afaka hisy vokany be ny tahan'ny. Afaka matoky ampahany amin'ny portfolio-ny tahirim-bola mpitantana, na izany aza, raha izany dia, dia tsy maintsy mandoa ny isan-jaton'ny ny nahazo tombony.
Na izany na tsy izany, indray mandeha niforona, portfolio-ny crypto tsy hanompo anao ny fiainanao rehetra. Ho mila ho averina sy “hozongozonina” amin'ny tsena fanovana, ny endriky ny fanantenana vaovao sy mafy orina vola madinika, ary, Farany, ny stagnation ny tsena, rehefa hariva ny fananan'ny crypto itokisana indrindra mahatonga ny faniriana hivarotra ny zava-drehetra, ary Nosisihanay Fiat vola ny nanangona.
Previous Post:Tafaray Colors ny Benetton manomboka manaiky cryptocurrency in Litoania
Next Post:Korea Atsimo ny regulator baiko voalaza 12 cryptocurrency fifanakalozana mba mandinika mpanjifa fifanarahana
Aprily 17, 2018 amin'ny 5:00 PM
Mey 15, 2018 amin'ny 3:54 AM
Mey 28, 2018 amin'ny 12:40 PM
Jona 4, 2018 amin'ny 9:53 PM